Go’aanka Real Madrid oo niyadjab ku ah Paul Pogba – Gool FM
Go’aanka Real Madrid oo niyadjab ku ah Paul Pogba
(England) 18 Juunyo 2019. Ciyaaryahanka Khadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa ka niyadjabay go’aan ay qaadatay Real Madrid, sida ay ku warameyso saxaafada Britain.
Pogpa ayaa dhawaan shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu tijaabiyo loolan cusub ee ah meel ka baxsan Manchester United, waxaana lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo Real Madrid ama Juventus.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Mirror” ee dalka England kooxda Real Madrid ayaa diiday inay bedesho qiimaha ay ku dooneyso inay ku dhameystirto heshiiska Pogba, taasoo keeni karta inay caqabad ku noqoto imaatinka laacibka reer France ee garoonka Santiago Bernabeu xagaagaan.
Maamulka kooxda Manchester United ayaa wali ku dhagan inay helaan aduun dhan 150 milyan ginni si ay u fasaxaan xiddigooda khadka dhexe ee Paul Pogba xilli ciyaareedka soo aadan.
Dalabka daah furka ahaa ay soo bandhigtay kooxda Real Madrid si ay u iibsato Paul Pogba ayaa gaarsiisan 90 milyan ginni, mana dooneyso Los Blancos in xitaa ay u dhawaato qiimaha ay miiska soo saareen saraakiisha Red Devils.
Man United ayaa dooneysa inay faa’iido weyn ka hesho heshiiska Pogba, balse dalabka hore ay soo gudbisay kooxda Real Madrid waxay faa’iido ahaan ka heli karaan kaliya £ 1 milyan oo ginni, marka loo fiiriyo lacagta ay kaga soo iibsadeen Juventus sanadkii 2016.